15+ Of The Greatest Anime NJENGOBA IQHAWE LAMI Academia! - Okunye
Uthandile Iqhawe Lami Lezemfundo? Bese Nansi Imibukiso engu-15 Enconyiwe yama-Anime!
Izwe lama-manga ne-anime laziwa ngalo ukwehluka, futhi kwaziwa ngobunzima bayo.
Kusukela i-anime nama-manga waba ngumhlaba jikelele, ukuthandwa kwayo kuye kwanda ngisho naseNtshonalanga, lapho incwadi yamahlaya namasiko opopayi ehluke kakhulu.
Namuhla sizogxila ku shōnen anime kubizwe IQhawe Lami Lezemfundo .
Kulabo kini abangazi, IQhawe Lami Lezemfundo iyi-/ superhero / fantasy manga ne-anime series elandela i-Izuku Midoriya encane. Nokufuna kwakhe ukuba yiqhawe elikhulu kunawo wonke,.
IQhawe Lami Lezemfundo ingenye yama-manga ne-anime athandwa kakhulu ezinsukwini zanamuhla, enomdlandla omkhulu womhlaba jikelele olandela njalo ukuzidela kuka-Izuku nabanye abalingiswa.
Nalu uchungechunge lwe-anime oluhamba phambili olufana ne- Qhawe Lami Academia!
1. Ibhola leDragoni
I-franchise ka-Akira Toriyama ethandwa kakhulu iqale Ibhola leDrako.
Kuyinto uchungechunge lwama-manga olulandela iNdodana encane uGoku ekuhambeni kwakhe ukuze abe ngumlwi omkhulu kunabo bonke emhlabeni wakhe oqanjiwe.
Kususelwa kunoveli yakudala Uhambo oluya eNtshonalanga , uchungechunge luneNdodana uGoku ebhekene nezitha ezahlukahlukene endleleni yakhe yokuba ngcono nokuvuthwa kule nqubo.
Ibhola leDrako mhlawumbe yi-manga engcono kakhulu yezobuciko ngaphandle futhi nesincomo esiqondile esivela kithi!
2. Mzingeli x Mzingeli
Noma ngabe ukhetha uchungechunge loqobo noma ukwenziwa kabusha, Mzingeli x Mzingeli kuyinto ozoyithanda nakanjani uma ubuthanda IQhawe Lami Lezemfundo .
Lolu uchungechunge lwe-anime olususelwa ekulweni nobuciko olunokufana okuningi nge Ibhola leDrako , futhi uyazi ukuthi sikuncomile lokho .
Mzingeli x Mzingeli iwashi eliphumuzayo elinamahlaya amaningi, ukuzidela, nokulwa yingakho silincoma ngokuphelele.
Kuyafaneleka: 23+ Hunter x Hunter T Shirts Ukuze Uthuthukise Iqoqo Lakho Lama-Anime
Okunye okudala, Yū Yū Hakusho inesimo seyodwa yochungechunge olubaluleke kakhulu lwe-karate anime ngaso sonke isikhathi.
Yū Yū Hakusho uchungechunge lwakudala oluvela kuma-90s oluhlanganisa ubuciko bempi nezinto ezingokwemvelo, lapho lufana kakhulu I-Bleach .
Umbukiso kufanele ubonwe ngokuphelele kubo bonke abalandeli be-anime uma kungenjalo ngendaba yawo, bese ubaluleka ngokomlando.
Kuyafaneleka: Uhlu Lokugcina Lwama-Yu Yu Hakusho Quote Okukunikeza Ukuqhuma Okuqhamuka Kuqhuma
Indaba yendodana kaGoku iyaqhubeka I-Dragon Ball Z , elandisa ngezinto ezamehlela uSon Goku ngesikhathi esemdala.
Ukulungiselelwa kucishe kufane futhi kubuye izinhlamvu ezindala eziningi, kepha izinsongo zintsha futhi ziyingozi kakhulu.
Ngenkathi Ibhola leDrako kwakuyindaba eza eminyakeni yobudala, I-Dragon Ball Z ingaphezulu kwendaba ye-superhero elandela ukuzidela kukaGoku ukusindisa uMhlaba ezinsongweni ezahlukahlukene zomhlaba.
5. Indoda Eyodwa Yesibhakela
Indaba yomfana oba namandla amakhulu kangangokuba angabulala noma ngubani ngesibhakela esisodwa kuphela icebo eliyinhloko lika Indoda Eyodwa Yesibhakela .
Unesithukuthezi ngenxa yalokhu futhi uhlala elangazelela inselelo yangempela.
Indoda Eyodwa Yesibhakela ithandwa kakhulu futhi ilinganiselwa kahle kakhulu okwakhe uchungechunge lwempi.
Kunamahlaya amahle amaningi esiqinisekile ukuthi uzokujabulela ukuwabuka.
Okuhlobene: Izifundo Zempilo Elula Okungafundwa Kumuntu Oyedwa We-Punch
UMasashi Kishimoto ungumbhali wenye futhi i-franchise enezingxenye ezintathu.
UNaruto ulandela uNaruto Uzumaki, iqhawe elaziwa nge-franchise, ngesikhathi esengumntwana nokufuna kwakhe ukuba phambili shinobi (ninja) wezwe lakhe.
UNaruto usebenzelana nentsha kaNaruto futhi umbona evuthwe waba ngumlwi omkhulu, yize indlela yakhe yayingacishe iphele ekupheleni kwalolu chungechunge.
Okuhlobene: 13+ Of The Anempikiswano Kunazo Zonke Anime Abalingiswa Wake Wake The Industry
7. IJoJo's Bizarre Adventure
Okunye okudala ohlwini, I-Bizarre Adventure kaJoJo mhlawumbe isihloko esibaluleke kakhulu ngokomlando kulolu hlu. Kanye neyokuqala Ibhola leDrako .
Lo mbukiso ubuye ugxile kubuciko bempi nokulwa kodwa unezici ezithile ezingaphezu kwemvelo ezikwenza ube okhethekile.
Umbukiso uyamangaza, njengoba isihloko sisho, kepha ngendlela enhle ngokulandelana okuthile okuhle.
Indaba kaNaruto iyaqhubeka ngaphakathi UNaruto: Shippuden,
kulokhu ezungezile ibona ukuvuthwa okuvuthwe ngokwengeziwe kweNaruto hhayi yena kuphela, kodwa futhi nekusasa nokuphepha komhlaba we shinobi (ninja).
Shippuden imnyama futhi ivuthiwe ngokwengeziwe, inama-villain angcono nezinhlu zezindaba ezibucayi kakhulu ngoba okuningi kusengozini.
Futhi inokuthuthukiswa kwezimilo okuhle futhi kulandela ukuvela kukaNaruto ngendlela enhle, ekugcineni embona egcwalisa iphupho lakhe lobuntwana.
9.U-Fullmetal Alchemist: Ubuzalwane
Isazi se-Alchemist esigcwele yindaba enhle, ethinta inhliziyo yezelamani ezimbili ezifuna ukusiza umhlaba. Futhi-ke, lungisa amaphutha abawenza esikhathini esedlule.
Okwangempela Isazi se-Alchemist esigcwele inesiphetho sokuqala ngoba yasakazwa ngaphambi kokuqedwa kwe-manga.
Ngokwesinye isandla, Ubuzalwane ulandela manga yokuqala.
Yikuphi okufanele ubuke? Kokubili, uma usibuza!
Okuhlobene: 30 Kwezingcaphuno Ezihamba Phambili Ezigcwele Zama-Alchemist Ezizongeza Incazelo Empilweni Yakho
Ucezu olulodwa akuyona i-anime yobuciko bokulwa, kodwa indaba kaMonkey D. Luffy nabasebenza naye pirate.
Ingenye yochungechunge lwama-anime nama-manga athandwa kakhulu ngaso sonke isikhathi.
Kukhona ukulwa okuningi, kepha kugxilwe ekuzideleni okukhulu kwepirate, ukuthuthukiswa kwabalingiswa, kanye nokufuna umcebo ofihlwe isikhathi eside.
Leso yisisusa sokugcina sombukiso wonke.
Uzojabulela ngokuphelele Ucezu olulodwa ngenxa yezigigaba eliveza zona. Futhi - yisihloko esimnandi kunazo zonke kulolu hlu.
11. Ikilasi Lokusocongwa
Ikilasi Lokusocongwa uchungechunge oluyinqaba impela, kepha siyaluthanda.
Isisekelo sokuthi iqembu labafundi besikole samabanga aphakeme kumele libulale uthisha wabo we-homeroom, isidalwa esifana nengwane esathembisa ukubhubhisa umhlaba ngonyaka owodwa.
Ngenkathi ebafundisa i-homeroom, ubuye abafundise nokuthi bangambulala kanjani.
Umbukiso uyahlekisa, unenqwaba yezifundo ngempilo, futhi naphezu kwesisekelo esiyinqaba - siyathembisa ukuthi uzowuthanda!
Kuyafaneleka: Izizathu eziyi-10 zokuthi kungani uKoro Sensei Enguthisha Ohamba Phambili Esikoleni Ongakaze Ube Nakho
12. I-Dragon Ball Super
Futhi okunye okulandelanayo endabeni yokuqala kaToriyama, I-Dragon Ball Super Iqhubeka nokuhlola uGoku nokuziphendukela kwakhe kwemvelo.
Kuhle kakhulu uhlala ekujuleni kwemvelaphi kaGoku futhi emqinisa ngokwengeziwe njengomsindisi woMhlaba.
Lolu chungechunge lubuye lusungule okuhlukahlukene futhi iGoku ifinyelele kwisikhundla saphezulu njengempi enamandla kunazo zonke eMhlabeni.
Ubhekene nezilo, izihlobo, ngisho nonkulunkulu futhi uyakwazi ukuba phambili, yingakho sisamthanda nezindaba zikaToriyama.
Kuyafaneleka: Uma Uthanda I-Dragon Ball Super, Ungahle Uthandane Nale mibukiso engu-7 yama-Anime
Isitatimende se-Dragon Ball Super PVC Super Saiyan God SS Vegito Thenga nge-Amazon Funda kabanzi Sithola ikhomishini evela e-Amazon nakwamanye amanxusa uma uthenga ngaphandle kwezindleko ezengeziwe kuwe.
Le anime nayo isuselwa ezintweni ezingaphezulu kwemvelo futhi inesimo esingokomlando.
Inuyasha inezigcawu ezanele zokulwa ukuze uhlale unentshisekelo uma uthanda IQhawe Lami Lezemfundo .
Inuyasha luhlobo lwe-classic futhi ngokuqinisekile ludinga ukunakwa ngenxa yendaba yalo enhle nezinganekwane ezicebile eziyidalayo neziyivezayo.
Kungase kudingeke ukuthi ujwayele isitayela esidala, kodwa impela kufanelekile.
Manje, UBoruto ingahle ibe nempikiswano nabalandeli abaningi be-hardcore be- UNaruto
Lokho kusho ukuthi, uchungechunge olugxile endodaneni kaNaruto Uzumaki, uBoruto Uzumaki, lusesincomo esivela kithi.
Sicabanga ukuthi kufanelekile ukubukwa.
Ukulandisa nesitayela kuhluke kakhulu, abalingiswa abasemqoka bavela esizukulwaneni esisha se- shinobi (ninja), kepha kuseyizwe elifanayo nokuhlelwa okufanayo.
I-Bleach inguqulo emnyama yezinye zezihloko ezikulolu hlu.
Inobuciko obuningi bokulwa kanye nezinto zokulwa, kepha igxile kokungaphezu kwemvelo, njengoba i-protagonist u-Ichigo kufanele alwe namademoni ahlukahlukene nabanye abaphikisi ukuze asindise umhlaba wakhe nabangane.
I-Bleach ukukhetha okuhle uma ukhetha udaba lwendaba olujulile futhi ngokuqinisekile uzodonselwa ezweni likaTite Kubo uma ulithwebula.
Amanye ama-Anime afana ne-My Hero Academia:
I-Twin Star Exorcist.
Futhi ngalokhu, singaphetha i-athikili yethu.
Uma ubuthandile IQhawe Lami Lezemfundo , ngokuqinisekile uzozijabulela zonke izihloko ezikulolu hlu futhi njengoba ezinye zezihloko zinde impela, uzoba nezinto ongazijabulela isikhashana impela.
Iwebhusayithi yombhali: fictionhorizon.com
I-Anime 12 Yodwa efana ne-Attack ku-Titan Kufanele Uqale Ukubuka
Izifundo Ezi-5 Zokuphila Eziqhamuka KwiQhawe Lami Lezemfundo Ukuze Ukwenze Umuntu Oncono
I-My Hero Academia Cosplay Fashion Casual High Help Canvas Shoes Deku Ochako Asui Thenga nge-Amazon Funda kabanzi Sithola ikhomishini evela e-Amazon nakwamanye amanxusa uma uthenga ngaphandle kwezindleko ezengeziwe kuwe.